Njengomthetho, umntwana ovela kwiinyanga ezi-6 ukuya kunyaka unomdla wokubakho okutsha kunye nokuva. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuqala ukufundela umntwana ekudleni kwabantu abadala, ngokukhawuleza ngokuthe ngcembe, isinyathelo ngesinyathelo, ukuzisa ukutya okutsha ekudleni komntwana. Ngokuqhelekileyo ngeli xesha, abantwana banesidlo esihle, ngoko badla ukutya ngokuzonwabisa. Kodwa ukuba umntwana akayidli, musa ukuyinyanzela, kungenjalo uya kuphazamisa ukuphikisana nokutya. Umntwana uqala ngokuzithandela ukwanelisa ukulamba kwakhe ngokutya okuqinileyo, nangona usenako ukuhlala encelisayo. I-regimen yesondlo kunye nokutshintsha kwexesha lokutshintsha, konke kukhangeleka ngokufana nokutya komntu omdala, umntwana uvela kwasekuseni kwasekuseni, kusemini, isidlo sasemini, emva kokutya kunye nokutya.
Indlela yokondla umntwana oneminyaka engaphantsi kwe-1 ubudala?
Ukuba umntwana phakathi kwe-1-1, iinyanga ezi-5 wadla iilres: iziqhamo kunye nemifuno yemifuno, i-porridges, ngoko unokuqala ukuvelisa ngokukhawuleza inyama yenkukhu, i-veal, yenkomo; ngokuncinci ukuzisa iintlanzi, zangaphambili zihlambulukile emathanjeni, isonka, i-yolk yolanga; emva kwemveliso yobisi. Kodwa khumbula, kufuneka uvelise iilora enye ngexesha ukuze uqinisekise ngokuchanekileyo ukuphendulwa komntwana kule mveliso (ukuba unayo nayiphi na into ekhuselekileyo kule mveliso).
Ixesha apho umntwana etholakele kubisi lonina zonke izinto eziyimfuneko kumzimba wakhe ziphela. Ngoko ke, unomdla kufuneka uthathwe ngokutya okufanelekileyo, okunempilo, okunokulinganisela okumele kudibanise iiprotheni, amafutha, iivithamini, i-carbohydrates kunye neemaminerali. Ngomntwana, ngokubanzi, njengomntu omdala, kubaluleke kakhulu ukuba ukutya kuncedo kwaye kuzalisekile, oko kukuthi, kubandakanya intlanzi, inyama, ingqolowa yemvelo, imifuno entsha kunye neziqhamo, iprotheni yemifuno.
Ngendlela efanelekileyo ukulungiselela umntwana?
Ekudleni komntwana ukuya kunyaka, ukutya akufanele kuhlanjululwe ngokufanelekileyo kunye ne-liquid. Sekunokukwazi ukubandakanya kwiitya zayo zokutya eziphekwe ngegrater enkulu, kwaye ukuba amazinyo okuqala avela, unako ukunika amancinane amancinci kumntwana ukuba afune.
Imifuno kunye neziqhamo kufuneka zihluthwe ngokukhawuleza ngaphambi kokusetyenziswa. Ukuba imifuno okanye iziqhamo kufuneka zibiliswe, zinqumle zibe ziincinci zincinci kwaye uphuze emanzini, emva kokuba ulusu lukulungele ukubola.
Inyama neentlanzi ziphekwe ngendlela eqhelekileyo, into kuphela engafanele yenziwe yinto yokuyifaka. Ukutya okulungele ukucatshungulwa kumacandelo amancinci, kwaye ukuba kuyimfuneko, yongeza amanzi ambalwa ngaphambi kokupheka, apho imifuno iphekwe khona.
Izitya ziyakuthatyathwa ngexabiso elincinci le-bhotile, i-cranberry okanye ijisi lemon, kodwa ingabi yityuwa kunye noshukela. Ukuba usebenzisa ioli yemifuno, kufuneka ihlambuluke kakuhle, ingaba ngqolowa, i-sunflower, umnquma.
Indlela yokwakha kabusha urhulumente wokutya umntwana?
Ukuba uqhubeka uncelise, ke ke uvumele amabele akho kuphela ekuseni nakusihlwa. Kwaye zonke ezinye izondlo kufuneka zitshintshwe kancane ngokungeniswa kokutya okuqinileyo.
Ewe, ukuba unqume ukuyeka ukunika umntwana wakho isifuba, okanye umntwana wasesondlo sokufakelwa, kufuneka uqale ukutshintsha omnye umntu omdala, ukutya okuqinileyo, ngosuku olulandelayo ufake indawo yokutya ngokutya okuqinileyo, ngosuku lwesithathu sithatha indawo yokutya kusasa.
Ukuba umntwana uvakalelwa isidingo sokusana, ngoko kunokwenzeka ukuba unike itiye ngaphandle kweshukela kwibhotile kunye ne-pacifier.
Sicima ukoma lwethu nomntwana. Kule njongo iibhebhile yamanzi engabonakaliyo ye-carbonate, itiye eyenziwe nge-chamomile, i-fennel, izithelo ezomileyo, i-dog rose, i-juice yeziqhamo ifanelekile. Ukuba awuqhelanga umntwana kwiziselo ezahlukahlukeneyo, uya kuvuya ukusela iziphuzo ezingenashukela.
Musa ukuyondla umntwana ngokutya okutyumkileyo, iimveliso zokutshaya, izithelo ezingavuthiyo, iziqhamo kunye nembewu, iziqhamo eziqhenqileyo, ezingenakunqunyulwa ngamantongomane, isonka esiqhekezayo kunye neesonka ezipheleleyo, imifuno eluhlaza kunye neesekese.
Umntwana oneminyaka elilodwa ulungele ukutya kunye namanye amalungu omndeni, oko kukuthi, kwietafile ezifanayo. Kodwa musa ukunika umntwana inqatha, edikiweyo, eneziqholo, ukutya okutshaya, i-confectionery kunye ne-baking, i-caffeine. Nika umntwana ukutya okulungeleyo, afanelekile iminyaka yakhe.
Umntwana wenqaba ukutya, wenzeni?
Fundisa umntwana wakho ukuba adle ngesinye isikhathi, kodwa ungaxinzezeli ukutya ukutya. Ngaphambi kokutya okuphambili akufanele kunikwe ukutya okumnandi.
Musa ukudibanisa izithako kwisisombululo esisodwa, unikele zonke izithako ngokwahlukileyo, ngoko umntwana uya kufunda ukuhlula izinto zokutya ezahlukeneyo.
Umntwana kufuneka athathwe ngaphezu kwemizuzu engama-20, lonke eli xesha kufuneka unike umntwana ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha ugogo, umongikazi, emkhombeni umntwana udla into enqabileyo yokudla kuwe. Ukuba umntwana wenqaba ukutya rhoqo, ugqirha kufuneka uboniswe. Umntwana uphilile, kodwa uyaqhubeka engafuni ukutya, ngoko oku kungabonisa ingxaki yengqondo. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba ufune ingcebiso yengcali.
Ukupheka kubantwana abaneminyaka emibili ubudala
Ukutya kwabantwana kwiinyanga ezili-7 ubudala
Iingxaki zobomi bentsapho. Njani ukunqoba?
I-chocolate glaze M read
Ukuxilongwa kunye nokunyangwa kwezifo zeenkqubo zokungcwaba kubantwana
Ungakulibala njani uthando lomntu otshatileyo
Isobho semifuno kwiprovence